Gootittiin atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha mt 1500 rikoordii addunyaa cabsite - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Gootittiin atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha mt 1500 rikoordii addunyaa cabsite
Gootittiin atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha mt 1500 rikoordii addunyaa cabsite
Gootittiin Oromoo atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500’niin rikoordii addunyaa kan cabsite wolmorkii atleetiksii Diamond League guyyaa har’aa Monaakotti geggeeffamen. Rikoordii mt 1500 cabsuuf Ganzabetti kan fudhate daqiiqaa 3:50.07 qofa. Rikoordii kana fooyyessuun waan hin eegamneef akka salphattis nidanda’ama jedhamee waan hintilmaamamne ture. Ganzabee Dibaabaaf, sadarkaa amma itti jirtutti, wonti hindanda’amneefi hinyaadamne jira hinfakkaatu. Addunyaanis kana quba qabaachuu qabdi.
Rikoordiin meetira 1500 guyyaa har’aa Ganzabeen cabe isa atleet Qu Yunxianiin bara 1993 galmeeffamee ture. Rikoordii kana cabsuudhaan Ganzabeen fiigicha mt 1500’niin caaltuu hundaa taatee galmee seenaa irra akka teettu isii taasiseera.
Ganzabee Dibaabaafi rikoordii harka isiitti kufe
Morkattuu ganzabee taatee fiigicha kana irratti kan asbaate atleetii teenya biroo Siifan Hasan turte. Siifan yeroo kanatti biyya Nezerlaandiif fiigdi, garuu. Siifan Ganzabee injifachuu dadhabdus lammaffaa ta’uudhaan sa’aa fiigicha mt 1500 rikoordii biyya Nezerlaand fooyyesse galmeessisuu dadeetteerti.
‘Atleetota Itoophiyaa keessaa rikoordii mt 1500 cabsuu kan danda’e ana qofa. Kuni ammo waan addaati,’ jechuun Ganzabeen gabaastotaaf injifannoofi gammachuu isii qooddeerti.
Baga gammadde, Ganzabee. Hundi keenyas bu’aa boonsaa argame kanatti baga gammanne.
Previous articleBaankiin Investimentii Awurooppaa (EIB) damee isaa Finfinnetti banate
Next articleNASA’n suuraa ardii fageenya miliyoona km 1.6 irraa kaasuu danda’eera